Qalabka ammaanka ee Blink XT oo leh sanado 2 way ka jaban yihiin Black Friday - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »Kaambiyalayaasha ammaanka ee Blink XT oo leh sanado 2 ayaa ka jaban Black Friday - BGR
Haddii aad rabto in aad si aan caadi aheyn, cimilo-u-adkeysi leh, rakibaadda alaabta ammaanka ee batroolka si aad u dhigto meesha aad rabto, ma jiraan wax ka fiican nidaamka ammaanka ee ammaanka guriga ee Blink XT. . Dadka intooda badani waxay ka fekeraan Arlo isla markiiba, laakiin kamaradaha Blink waa kuwo wanaagsan oo waxay bixiyaan nolol batari aan caadi ahayn oo soconaya illaa laba sano, halkii laba ama saddex bilood ah sida sawirada Arlo. Shirkadaha Blink XT ayaa qiimo kasta qaata qiimaha tafaariiqda oo buuxa, laakiin Amazon ayaa hadda haysata iibka xitaa qiimo weyn oo ka badan inta aan aragno Black Friday. Dhamaan miisaska ayaa lagu daboolay iibkan, tan iyo markii la sameeyay hal nidaam kamarad et kamarado dheeraad ah si ay u nidaamyada kamaradaha 5 kaas oo ka faa'iideysanaya hoos u dhaca 200 $. !
WATERPROOF ISTICMAALKA AMA DIYAARINTA: Ku rid oo ku dhaqdhaqaaqaaga kamaradaha Blinkkaaga meel kasta oo ka mid ah guriga, gudaha iyo dibedda. Ku bilaw nidaamka yaryar oo u sii kaca sawirada 10 ee ku yaala qalabka isku dhafan.
QIIMAYNTA MACALLINKA: Qalabka lagu ogaanayo muraayadda, marka sawir qaadaha la dhaqaajiyo, kamaradaha Wi-Fi waxay u diraan digniin si aad uga badbaadisid maqaalkii gaaban ee munaasabadda.
NIDAAMKA SECURITY shaqeeya baytari: Camera Wireless Guriga la madaxbannaani 2 sano 2 ku shaqeeya by AA batariyada lithium AA 1.5v non-dabayn karo (ka mid ah), macluumaadka waxaa ka kamaradaha IP diray via WiFi.
GURIGA GURIGA GURIGA GURIGA VIDEO VIDEO: Kantaroolida guriga oo sahlan si aad iskugu rakibto daqiiqado; Kantaroolka sahlan ee kamaradaha wireless leh appka ama appka bilaashka ah ee ka socdo Blink Home Monitor (wuxuu u baahan yahay 10.3 ama Lollipop iwm ama ka dambeeya).
BILAASHO BILAASH AH LACAG LA'AAN: gebi ahaanba wireless, oo aan lahayn khidmad bille ah ama qandaraas adeeg oo loo baahan yahay.  Raac @BGRDeals on Twitter si aad u raacdo dalabyada ugu dambeeyay iyo kuwa ugu dambeeyay ee aan ka helno webka.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan dalabkayaga iyo xayeysiisyada maalgalinta, u dir email maalgalin @ bgr .com
Waxyaabaha ku jira BGR Deals waxay ka madaxbannaan yihiin Tifaftirka iyo Xayeysiiska, BGRna waxaa laga yaabaa inay hesho guddi iibsasho oo lagu sameeyo daabacaadaheena.
Ka hel labo labbo Sonos iyo kaadhka hadiyadeed ee Amazon 30 $ oo ka yar qiimaha afhayeenka - BGR